Loka Ady amin’ny kolikoly 2016: Misokatra ny fisoratana anarana hatramin’ny 05 Septambra 2016 - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 25 Jolay 2016 ao amin'ny Hetsika, An-gazety
Isan-taona ny Transparency International dia manome ny loka “Ady amin’ny kolikoly” hoan’ny olona na fikambanana iray nohon’ny fandavan-tena feno fahavononana ananany entina miady amin’ny kolikoly.
Ny tanjon’ny loka “Ady amin’ny kolikoly” izay omen’i Transparency International dia ny hanome ny lanja sahaza azy ny hetsika na ny fandraisana andraikitry ny olona iray na maromaro na koa fikambanana izay mitondra ny anjara birikin’izy ireo eo amin’ny sehatry ny ady amin’ny kolikoly ary ny andraikitra sahanin’ny Transparency International.
Natomboka tamin’ny taona 2000 ary nitondra ny anarana hoe “Lokan’ny Fahitsiana” izay niova ho Loka “Ady amin’ny kolikoly” kosa ny taona 2016 ary manome voninahitra ireo olona na fikambanana miavaka rehetra maneran-tany. Isan’izany ireo mpanao gazety, ireo mpampanoa lalàn’ny repoblika, ireo mpiasam-panjakàna ary ireo mpitarika ny fiaraha-monim-pirenena.
Ireo mpandresy dia miteraka aingam-panahy ho an’ny hetsika ady amin’ny kolikoly satria ny asan’izy ireo dia mampatsiahy ny hafatra iraisana: Azo atao tsara ny miady amin’ny kolikoly.
Marina fa ny andrasana amin’ireo mpandresy dia ny fitondràntena mendrika alain-tahaka ananan’izy ireo. Na izany aza anefa ny loka Ady amin’ny kolikoly dia mampiseho indrindra ny fankasitrahana ny hetsika na fandraisana an-tanana miavaka izay maneho ireo fiantraikan’ireo ady amin’ny kolikoly maneran-tany.
Dieny androany dia afaka manome anaran’olona ianao amin’ny alalan’ity rohy ity Remplissez le formulaire sur ce lien . Alohan’ny hanomezana ilay anarana anefa dia mila mamaky tsara ity les directives du Prix anticorruption
Raha misy fanontaninaa dia afaka mifandray aminay amin’ny alalan’ity mailaka manaraka ity anticorruptionawards@transparency.org.
Ny fanoratana anarana dia azo raisina ny 29 jona hatramin’ny 05 septambra 2016.